Tsy mifarana eo amin’ny fisian’ny sivana ny fanenjehana ireo Rosiàna blaogera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2019 14:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, English, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Oviana ary vao hifarana, raha hifarana, ny fanenjehana an'i Alexey Navalny? Sary nafangaron'ny mpanoratra.
Tantara Rosiana tsy misy fiafarany ny fanenjehana an'i Alexey Navalny. Nijanona ho tavan'ny hetsika fanoherana i Navalny, ilay blaogera sady malaza indrindra mpitarika ny fanoherana ao amin'ny firenena na dia miaina anatina trano voaara-maso aza izy hatramin'ny volana Febroary. Nandritra ny taona farany teo, niakatra fitsarana i Navalny mba hiatrika fiampangana mikasika heloka bevava maro isan-karazany sy fanenjehana araka ny lalàna.
Manefa sazy dimy taona an-tranomaizina izy ankehitriny noho ny fanodinkodinam-bola. Tsy tapitra mialohan'ny 161 andro ny fanibohana an-trano an'i Navalny (izay aorian'izany, mety halavaina fanindroany indray). Ny tapaky ny volana Martsa, nomen'ny Lehiben'ny Fampanoavana baiko ireo mpanao sivana mba hanakana ny fidiran'i Navalny amin'ny blaoginy ao amin'ny Aterineto.
Lehilahy iray izay fahiny hita foana teo amin'ny fiarahamonin'olontsotra Rosiana, tsy tsikaritra intsony i Navalny raha tsy rehefa izy hoentina avy any an-tranony mankany amin'ny efitrano fitsarana.
Nidika zava-dehibe hatrany tamin'ny antoko Rosiana mpanohitra anefa i Alexey Navalny, nihoatra noho ny lehilahy nitokana ary mbola mitohy mitantana ny tetikasany iadiana amin'ny kolikoly sy fanavaozana ireo tambajotra sosialy ny ekipana mpiasa mikarama sy mpirotsaka an-tsitrapo. Resin'ny vondrona iray misy teknisiana mahay ireo Rosiana mpanao sivana, nanehoany ny blaogin'i Navalny teny amin'ny tranonkala maro, izay sakanan'ny governemanta foana ary tsy mitsahatra soloin'ireo mpomba an'i Navalny. Efa roa volana izao ity kilalaon'ny saka sy totozy ity ary tsy mandresy i Kremlin. Tsy mahagaga noho izany raha toa ka mitodika any amin'ireo mpirotsaka an-tsitrapo izay mitantana ity dingana fandinganna sivana sy fanodinkodinana ity ireo mpikatroka mpomba ny ao Kremlin.
Ruslan Karpuk, iray amin'ireo teknisiana mirotsaka an-tsitrapo hitantana ireo tranonkala fitaratra hialàna amin'ireo Rosiàna mpanivana sy hahatonga ny bilaogin'i NAvalny ho azo idirana hatrany ho an'ireo mpampiasa ny RuNet. Vkontakte.
Androany, 20 Mey 2014, nosoratan’ny gazety Izvestia mifandray amin'ny Kremlin, fa niantso ny Lehiben'ny Fampanoavana ny vondrona Aterineto iray mba hanadihadiany mikasika ny viriosy informatika iray izay toa manakana ireo fitaovana ampiasan'ny mpampiasa, mandra-pandrotsak'izy ireo vola ho an'ny kaonty an-tambajotra iray. Ity kaonty ity, hono, dia ilay kaonty hita tao amin'ny navalny.us ihany, izay mandefa ireo mpitsidika ho any amin'ny blaogy fototra an'i Navalny. An'i Vladislav Zdolnikov sy i Ruslan Karpuk ilay tranonkala, izay manangona fanampiana ara-bola ho an'ny asan'izy ireo mba hahatonga ny blaogin'i Navalny ho azo idirana hatrany. Iray tamin'ireo fomba namatsian‘i Zdolnikov vola fahiny ilay tetikasany i2TV,, fahitalavitra anaty aterineto izany poketram-bola an-tambajotra izany, ampiantranoana ao amin'ny Yandex.Dengi. (Efa hafa ny kitapom-bolan'ilay fantsona amin'izao fotoana izao.) Ankehitriny, miaraka miasa amina tetikasa Aterineto vaovao antsoina hoe Newcaster.TV i Zdolnikov sy i Karpuk.
Milaza i Aleksandr Litke, izay mitantana ny vondrona Aterineto atolotra ao amin'ny Izvestia fa nampiditra viriosy tao anatina plugin iray izay afaka apetraky ny mpampiasa aterineto mba hidirana amin'ny fitaratry ny blaogin'i Navalny ireo mpanao rindrambaikon'i Navalny. Namoaka tranonkala vaovao natao manokana ho an'ny fanapariahana izany teoria izany mihitsy aza i Litke, nanontany tao amin'ilay tranonkala hoe “Nanapa-kevitra ny hangalatra ireo mpampiasa aterineto ve ilay mpiady masina amin'ny kolikoly?” Karpuk aloha, izay manampy amin'ny fitazonana ilay fitaratra mankany amin'ny blaogin'i Navalny, no nahatsikaritra ity “fiampangana viriosy” ity voalohany indrindra, iray volana mahery kely izay. Tamin'ny 19 Aprily, nanamarika i Karpuk fa nipoitra tamin'ny sehatra maro fifampiresahana an-tranonkala ny andiana hafatra famHàN olana nitovy tamin'izany tany am-piandohan'ny volana Aprily. Sarina fefina solosaina toa nivaingana, izay manapoitra ny hafatra hoe: “Mitenena hoe TSIA amin'ny sivana! Manomeza 100 roubles mba hiadiana amin'izany”, miaraka amin'ny safidy handefa vola eo amin'ny poketram-bola an-tambajotra navalny.us sisa no porofo farany tokony atao. Araka ny lazain'i Karpuk, tsy tena izy izany sary izany.
“Mitenena hoe TSIA amn'ny sivana! Manomeza 100 roubles mba hiadiana amin'izany!” Lazaina fa porofon'ilay viriosin'i Navalny natao hangalarana vola avy amin'ireo mpanohana. LiveJournal.
Raha ireo kaontiny ao amin'ny tambajotra sosialy no jerena, Eorazianista mavitrika i Litke, manokan-tena ho an'ny fampivelarana ny hery jeopolitikan'i Rosia ary matetika mamoaka lahatsoratra manavakavaka ara-pirazanana, tsy tia pelaka ary tsy tia Amerikana. Mifantoka amin'ny fiadiana amin'ny fahavetavetana an-tambajotra ny vondrony, izay misy toy ny vondrom-piarahamonina ho an'ny daholobe ao amin'ny Vkontakte. Mpanakanto ara-niomerika afaka manao zavatra i Litke, mamokatra sary novaina miaraka amin'ny sary manaitra izay mitovy amin'ireo “sary mahafinaritra” mipoitra ao amin'ilay tranonkala nasionalista malaza be Sputnik & Pogrom.
Efa misy fiampangana matotra bebe kokoa atrehin'i Navalny ao anatin'ireo trangana heloka bevava hafa anenjehana azy, kely noho izany ny finoana hoe tena loza mitatao ireo fiampangan'i Litke. Ankoatra izany, tsy misy ny porofo marina momba ny hoe viriosy napetraka mba hangalarana ireo mpanohana an'i Navalny. Somary kidaladala rahateo izany hevitra izany. Tsy misy hampiasa saina an'i Litke sy ny manodidina azy izay mpomba an'i Kremlin mihitsy angamba izany rehetra izany satria ny tanjona tany am-boalohany dia ny tsy hanao afa-tsy ny hanaparitaka siosio sy vaovao ratsy mikasika ilay mpiady masina amin'ny kolikoly any Rosia. Amin'ny fikendrena ireo tranonkala fitaratra izay ampiasain'ireo mpamaky mba hialàna amin'ireo mpanao sivana avy ao amin'ny Fanjakana, misy ihany koa fahafahana mandrahona ireo mpi tia teknolojia mirotsaka an-tsitrapo izay tena ianteheran'i Navalny fatratra amin'izao fotoana izao.
Hatreto anefa, na i Karpuk na i Zdolnikov dia toa mbola tsy misy kivy. Takatr'izy ireo fa mampidi-doza ny miasa ho an'ilay lehilahy enjehina fatratra ao Rosia.